Le yindlela uXiaomi kunye no-Oppo abafunda ngayo iminwe yokufunda | I-Androidsis
Le yindlela itekhnoloji entsha yokufunda ngeminwe yesikrini yeXiaomi
Abavelisi abangakumbi nangakumbi babheja kwi umfundi weminwe odityaniswe kwiscreen. Sithetha ngetekhnoloji yenoveli kwaye i-Samsung Galaxy S10 iya kubonakala ngokusebenzisa inguqulelo ye-ultrasonic ngeziphumo ezingcono kunayo nantoni na esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Okanye hayi. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba uXiaomi ubonakalisile umfundi weminwe odityaniswe kwiscreen igubungela phantse yonke indawo, ukuze sikwazi ukuvula ifowuni kwiindawo ezininzi.
Kwaye kwenzeka okufanayo naku-Oppo. Hayi, bobabini abavelisi baseAsia abakadibaniseli imikhosi yokulwa nabakhuphisana nabo kwicandelo leefowuni eziphathwayo, kodwa abafana abavela ku-Oppo ngokungenanjongo nabo babonakalise itekhnoloji efanayo kwangolo suku lunye ukuvumela ukusetyenziswa kwe umfundi weminwe ngaphakathi kwesikrini izixhobo zakho kwaye igubungela phantse yonke ipaneli. Makhe sibone ukuba ngaba bafundi be-biometric basebenza njani.
1 Lo ngumfundi weminwe odityaniswe kwiscreen esenziwe nguXiaomi
2 Lo ngumfundi weminwe odityaniswe kwiscreen esenziwe ngu-Oppo
Lo ngumfundi weminwe odityaniswe kwiscreen esenziwe nguXiaomi
Njengoko besitshilo, i Iminwe yokufunda ihlanganiswe ngaphakathi kwesikrini Ziya ngokuya zisefashonini kwaye ngokuqinisekileyo kulo nyaka we-2019 siza kubona izixhobo ezingakumbi nangakumbi ngale teknoloji. Kwaye ayisiyiyo kuphela indlela yala maxesha ngayo ukuba ivule ifowuni yakho ngokucinezela iscreen, kodwa ngenxa yokuba obu buchwephesha busindisa indawo kwifowuni, iyenze ibe ncinci kwaye ke ibe nomtsalane ngakumbi.
Njengoko ubona kwividiyo ehamba nale migca, Xiaomi Uyilele eyakhe yokufunda ngomnwe edityaniswe ngaphakathi kwesikrini enika ukutsiba lomgangatho obanzi ngokwenene ngokuvumela umphezulu wayo oluncedo ukuba wandiswe phantse kwiscreen sonke. Ngelo xesha yayingumbono kodwa ngoku iyinyani. Kwaye njengesampulu, ividiyo epapashwe ngumenzi waseAsia.
Ungakubamba njani ukuthengwa kweapp kunye neminwe kwi-Android
Lumka, ukuba Umphathi we-Xiaomi ubhengeze ukuba umphezulu wokuvula yi-25 x 50 yeemilimitha. Ayisiyo yonke isikrini kunjalo, kodwa indawo egqunywe sisifundi somnwe esidityaniswe ngaphakathi kwesikrini ingaphezulu ngokwaneleyo kwinani labasebenzisi kuba iya kuthi iququzelele umsebenzi wokuvula izixhobo ngale teknoloji.
Ukongeza, ayisiyongxaki kuphela ukuyisebenzisa, kodwa ngoomatshini bokushicilela abodwa esinokuthi siqwalasele iminwe yethu, senze inkqubo ukuba ikhawuleze kwaye ibelula. Yintoni enye esinokuyicela?
Lo ngumfundi weminwe odityaniswe kwiscreen esenziwe ngu-Oppo
Kwaye kwenzeka njani ukuba kwangolo suku lunye u-Xiaomi abonise ngalo umfundi omtsha weminwe odityanisiweyo ngaphakathi kwescreen kwividiyo, enye yeentshaba zayo ezinkulu ibonisa itekhnoloji efanayo. Hayi, u-Oppo akonelanga ngokubhengeza I-teknoloji ye-10X yokulahleka kwe-optical eziza kuzisa iiflegi zazo ezilandelayo, kodwa ikwabonakalise isisombululo esifana nesebhayometri.
Zeziphi ezona zivamvo zibalulekileyo kwifowuni yakho ye-Android?
Njengoko ubona kwividiyo, umfundi weminwe odityanisiweyo ngaphakathi kwescreen, kukho Ifowuni yokuchasa kunye ne-biometric sensor enika umlinganiselo wokufunda opheleleyo. Kwividiyo asiboni ukuba bacinezela kuzo zonke iindlela ezinokubakho kodwa kubonakala ngathi umfundi ofaka iminwe uya kuba nakho ukugubungela indawo ebanzi ngokwaneleyo ukuba umsebenzisi akwazi ukuvula i-terminal ngaphandle kwengxaki.
Asazi ukuba yeyiphi eya kuba yimodeli yokuqala yeXiaomi kunye neOppo yokusebenzisa le intsha umfundi weminwe idityaniswe ngaphakathi kwiscreen kodwa okucacileyo kukuba likamva lecandelo. Kwaye ukuba i-Samsung Galaxy S10 ayifikeleli kwintengiso ngetekhnoloji yolu hlobo, soyika kakhulu ukuba umenzi waseKorea uzakushiyeka ngasemva, ngokuthetha ngobuchwephesha, kukhuphiswano lwabo ngexesha lokurekhoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Le yindlela itekhnoloji entsha yokufunda ngeminwe yesikrini yeXiaomi
Zeziphi iimveliso ekusetyenzisweni okungasemva? Isifundo siyayityhila
IXiaomi Mi MIX 3 ene5G sele inomhla wentetho